8 O wee ruo n’afọ nke isii, n’ọnwa nke isii, n’abalị ise n’ọnwa ahụ, na m nọ ọdụ n’ụlọ m, ndị okenye Juda nọkwa ọdụ n’ihu m,+ mgbe aka Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova dịkwasịrị m n’ebe ahụ.+
2 M wee malite ịhụ, ma, lee! e nwere ihe yiri ọkụ;+ malite n’ihe yiri úkwù ya gbadaa, e nwere ọkụ,+ malitekwa n’úkwù ya gbagoo, e nwere ihe yiri ihe na-enwupụ enwupụ, dị ka ọla nke na-egbu maramara.+
3 O wee matịa ihe yiri aka+ jide m na ntutu isi m. Mmụọ+ wee bulie m bugoo m n’agbata elu ala na eluigwe wee bute m Jeruselem n’ọhụụ Chineke,+ n’ọnụ ụzọ ámá dị n’ime+ nke chere ihu n’ebe ugwu, n’ebe ihe oyiyi ekworo nke na-akpali ikwo ekworo dị.+
4 Ma, lee! ebube Chineke Izrel dị ebe ahụ,+ nke yiri ihe ahụ m hụrụ na ndagwurugwu.*
5 O wee sị m: “Nwa nke mmadụ, biko, lepụ anya n’ebe ugwu.” M wee lepụ anya n’ebe ugwu, ma, lee! e nwere ihe oyiyi ekworo+ n’ụzọ mbata dị n’ebe ugwu nke ọnụ ụzọ ámá ebe ịchụàjà.
6 O wee gaa n’ihu ịsị m: “Nwa nke mmadụ, ị̀ na-ahụ oké ihe arụ ha na-eme,+ bụ́ ihe ụlọ Izrel na-eme n’ebe a ka m wee hapụ ebe nsọ m?+ Ị ka ga-ahụ oké ihe arụ ndị ọzọ.”
7 O wee kpọrọ m bịa n’ọnụ ụzọ ogige ahụ, m wee malite ịhụ, ma, lee! oghere dị ná mgbidi ahụ.
8 O wee sị m: “Nwa nke mmadụ, biko, gwupuo mgbidi a.”+ M wee gwupuo mgbidi ahụ, ma, lee! ọnụ ụzọ dị n’ebe ahụ.
9 O wee gwa m ọzọ, sị: “Banye hụ ajọ ihe arụ ha na-eme n’ebe a.”+
10 M wee banye hụ, ma, lee! ná mgbidi ahụ gbaa gburugburu, a tụrụ ụdị ihe ọ bụla na-anọchi anya ihe ndị na-akpụ akpụ+ na anụmanụ na-asọ oyi,+ na arụsị niile na-asọ oyi ka nsị, bụ́ ndị ụlọ Izrel mere.+
11 Ndị ikom iri asaa+ n’ime ndị okenye ụlọ Izrel, ha na Jeazanaya nwa Shefan,+ guzo n’ihu ihe ndị ahụ, onye nke ọ bụla jikwa ihe e ji etinye ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ n’aka ya, ísì ụtọ nke ihe nsure ọkụ ahụ nọkwa na-arịgo.+
12 O wee sị m: “Nwa nke mmadụ, ị̀ hụla ihe ndị okenye ụlọ Izrel na-eme n’ọchịchịrị,+ onye ọ bụla n’ime ime ụlọ ya o debere ihe oyiyi a pịrị apị? N’ihi na ha na-asị, ‘Jehova anaghị ahụ anyị.+ Jehova ahapụwo ala a.’”
13 O wee gaa n’ihu ịsị m: “Ị ka ga-ahụ oké ihe arụ ndị ọzọ ha na-eme.”+
14 O wee kpọrọ m bịa n’ọnụ ụzọ ámá nke ụlọ Jehova, nke dị n’ebe ugwu, ma, lee! ndị inyom nọ ọdụ n’ebe ahụ, na-akwara chi bụ́ Tamọz ákwá.
15 Ọ gwakwara m, sị: “Ị̀ hụla ihe a, nwa nke mmadụ? Ị ka ga-ahụ oké ihe arụ+ ndị ọzọ ka ndị a njọ.”
16 O wee kpọbata m n’ogige nke dị n’ime ụlọ Jehova,+ ma, lee! n’ọnụ ụzọ ụlọ nsọ Jehova, n’agbata ihe owuwu ụzọ mbata na ebe ịchụàjà,+ e nwere ihe dị ka ndị ikom iri abụọ na ise+ ndị gbanyere ụlọ nsọ Jehova azụ+ ma chee ihu n’ebe ọwụwa anyanwụ, ha chere ihu n’ebe ọwụwa anyanwu na-akpọrọ anyanwụ isiala.+
17 O wee gaa n’ihu ịsị m: “Ị̀ hụla ihe a, nwa nke mmadụ? Ihe arụ niile ụlọ Juda meworo n’ebe a ọ̀ bụụrụ ha ntakịrị ihe, nke na ha na-eme ka ime ihe ike jupụta n’ala a,+ ka ha wee kpasuo m iwe ọzọ? Lee, ha na-adụ m alaka osisi n’imi.
18 Mụ onwe m ga-ejikwa ọnụma mee ihe.+ Anya m agaghị eme ebere, agaghịkwa m enwe ọmịiko.+ Ha ga-eji oké olu kpọkuo m, ma agaghị m anụ olu ha.”+
^ Ezi 8:4*
mailto:?body=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1011452%26Book%3D26%26Chapter%3D8%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl